China စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်အရောင်ခြယ်ထားသောကော်ဖီ ၃၅၀ ဂရမ်အဖြူရောင်ကဒ်ပြားစက္ကူအပြင်ဘက်သေတ္တာထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းချသူ | Huaguang
အရွယ်အစား: 17 * 8 * 3.5cm
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် - ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင် ၅၀ ပက်စ်သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်
အရေအတွက် (သေတ္တာများ) 1 - 5000 5001 - 50000 > 50000
ကားbox လေးထောင့်ကွက် ထုပ်ပိုးကျယ်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၌ကော်ဖီကားရှိသည်d သေတ္တာများ, သကြားလုံးကားတစ်စီးd သေတ္တာများ, cookie ကိုကားd သေတ္တာများစသည်။ အလှအပလုပ်ငန်းသည် lipstick card box၊ mask card card၊အဆိပ် ကဒ်သေတ္တာအစရှိသဖြင့်၊ ဖိနပ်နှင့်အ ၀ တ်အထည်လုပ်ငန်း၊ ခြေအိတ်၊ အ ၀ တ်အစား၊ လက်ဆောင်သေတ္တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကဒ်သေတ္တာသည်စျေးသက်သာသောကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာသက်သာစေသည်။ ထိုအခါကဒ်သေတ္တာဒီဇိုင်း, အရည်အသွေးနှင့်အသွင်အပြင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ဆောင်သေတ္တာကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လှပတဲ့ကဒ်ပြားလေးတွေကိုမျှဝေလိုက်ရအောင်။
၁။ ကဒ်သေတ္တာများကိုလက်ဆောင်သေတ္တာများထဲသို့ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအဖြူရောင်ကဒ် ၄၀၀ ဂ၊ လေးရောင်စုံပုံနှိပ်ခြင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ မျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်တောက်ပသောသေတ္တာများ၊ သေတ္တာတုံးလုံးသေတ္တာ၊ ကတ်ထူပြားလက်ဆောင်သေတ္တာများနှင့်စာနယ်ဇင်းအမှတ်အသားခေါက်။ သုံးနိုင်သည်။ အတူတူပင်, ဒါပေမယ့်သူကကွဲပြားခြားနားသောခံစားရ၏။
၂။ အစားအစာတန်းကဒ်သေတ္တာထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပေါင်းစည်းထားသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အထူးအစားအစာကဒ်ပြားစက္ကူ ၃၅၀ ဂရမ်၊ Matte film၊ ကော်မပါ ၀ င်သောအရာများကိုသေတ္တာထဲသို့ခေါက်နိုင်သည်။ သေတ္တာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအစားအစာကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
၃.၅၅၀ ဂရမ်အဖြူရောင်ကဒ်၊ လေးရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ matte film ၏မျက်နှာပြင်သည်ခေါက်လိုက်သောအခါတွင် polygonal card box ဖြစ်လာပြီးပျော်စရာကောင်းသောသကြား၊ ဖက်ရှင်နှင့်လှပမှုရှိစေရန်သေတ္တာအဖုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်။
4. 300 ဂအဖြူရောင်ကဒ်၊ အစက်အပြောက်ပုံနှိပ်ခြင်း + လေးအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ သေ - ဖြတ်ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းထားသောမျက်နှာပြင်ဖောဖိုက်၊ ဖဲကြိုးလက်ကိုင်။
၅.၅၅၀ ဂရမ်အမှုန့်စက္ကူ၊ မျက်နှာပြင် CMYK +2pantong အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းရှိပူပြင်းသည့်ငွေ + ပြည်တွင်းခုံး၊ ခံစားမှုမညီမမျှဖြစ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းပြန်ဆီအပေါ် မူတည်၍ အရောင်နှင့်အရောင်မှမည်သည့်အရာကအဆင့်မြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသည်။ အရသာ၊ ထုတ်ကုန်ကိုပြုပြင်ရန်သေဖြတ်ပြီးနောက် 1mm မြှင့်ထားသောစက္ကူ pantong အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းအောက်ခြေဖြင့်ထည့်ပါ။
၆.၃၀၀ ဂရမ်အဖြူရောင်ကဒ်၊ ၂ pantong အရောင် + CMYK အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ တိကျမှုရှိသောအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းကသေတ္တာ၏အသွင်အပြင်ကိုတန်ဖိုးမထားပါ။ ဒေသခံခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်, ထုတ်ကုန်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမီးမောင်းထိုးပြ, တစ် ဦး Matte ရုပ်ရှင်နှင့်ဖုံးလွှမ်းမျက်နှာပြင်, high-end လေထုပြီးနောက် box ထဲသို့။
၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့် ၃၀၀ ဂဂအဖြူကဒ်၊ ၃ pantong + CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း၊ တောက်ပသောအရောင်သည်အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ၊ ဒေသတွင်းခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်မျက်နှာပြင် submembrane၊ ကုန်ပစ္စည်း၏ထူးခြားချက်များကိုပြသပါ။ တန်ချိန်။
၈.၃၀၀ ဂရမ်အမှုန့်စက္ကူ၊ ၂ pantong အရောင် + CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းအရောင်သည်ဘက်လိုက်မှုမရှိစေရန်သေချာစေရန်၊ LOGO သည်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုပြုပြင်ရန်မြှင့်ထားသောထည့်သွင်းထားသော pantong အရောင် layout ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်အဆင့်, သေဖြတ်တောက်ခြင်း, နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် box ကို laminating ပြီးနောက်။
၉.၃၀၀ ဂရမ်အဖြူရောင်ကဒ်၊ ပါးလွှာခြင်းမရှိသော CMYK ပုံနှိပ်ခြင်းအဖုံးသည် Matte film ဖြစ်ပြီးအကြမ်းခံ။ လွယ်ကူစွာပျက်စီးခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင်သေဆုံးသောဖြတ်သေတ္တာပုံစံဖြစ်သည်။
၁၀။ ဂရမ် ၃၀၀ ဂရမ် matte silver card၊ အဖြူရောင်အဖြူရောင်အလွှာတစ်ခုကိုခုန်ပါ။ (ဒေသတွင်းတွင်အဖြူရောင်မင်ကိုပုံနှိပ်ရန်မလိုအပ်ပါ) နှင့် CMYK ပုံနှိပ်ခြင်း + ၂ pantong အရောင်များကိုယူနီဖောင်းအရောင်သေတ္တာနှင့်ပြောင်းပြန်ဆီတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ငွေကိုပြုလုပ်ပါ။ တောက်ပသောသေတ္တာ၏အရောင်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော LOGO hot flash silver သည်အလင်းရောင်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအရောင်များဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သေတ္တာတစ်ခုထဲသို့ ဖြတ်၍ သေဆုံးသည်။ အဖြူရောင်အတွင်း၌အဖြူရောင်ထည့်ထားသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။
11. 400 ဂရမ်အဖြူရောင်ကဒ်၊ CMYK +2pantong အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ သေတ္တာ၏အရောင်သည်ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်း၊ မျက်နှာပြင်သည်မွေ့တည့်ဖြင့်ဖုံးထားသောမျက်နှာပြင်၊ ဒေသတွင်း flash UV နှင့်အချို့သောနေရာများတွင်ခုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မြင့်မြတ်သောနှင့်ကြော့, ပိုသဟဇာတ။
၁၂.၃၅၀ ဂရမ်အမှုန့်စက္ကူ၊ CMYK +2pantong အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ သေတ္တာမျက်နှာပြင်အရောင်လျှော့ထားသောနှင့်တောက်ပခြင်း၊ အရောင်တူညီမှု၊ အချို့သောနေရာများတွင်အသုံးပြုသော pantong အရောင်၊ မူရင်းရေနံမျက်နှာပြင်စက္ကူမျက်နှာပြင်အရောင်စသည်တို့သေချာစေရန်။ သိုမဟုတ်သိုလှောင်ခြင်းမှပုံနှိပ်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အတူလျှော့ချခြင်းနှင့်သေတ္တာကိုအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
၁၃.၃၀၀ ဂရမ်အဖြူကဒ်၊ CMYK +2pantong အရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောညှိနှိုင်းခြင်း၊ သေတ္တာယူနီဖောင်းတစ်ခုစီ၏အရောင်ကိုသေချာစေရမည်၊ မျက်နှာပြင်နူးညံ့သောထိတွေ့မှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည့်လက်၊ အရည်ကြည်ဖုများဖြည့်ထားသောထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးသေတ္တာကိုသေတ္တာများထဲသို့ဖြတ်သည်။
ရှေ့သို့ အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုစက္ကူသေတ္တာသည် PVC စာအုပ်အမျိုးအစားသေတ္တာထည့်သွင်းထားသည်